Dowladda Hoose ee Garoowe oo joojisay furitaanka kaalmaha shidaalka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDowladda Hoose ee Garoowe oo joojisay furitaanka kaalmaha shidaalka
Dowladda Hoose ee Garoowe oo joojisay furitaanka kaalmaha shidaalka
January 31, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Hoose ee magaalada Garoowe ayaa joojisay furitaanka kaalmaha shidaalka ee magaalada, sida uu shir saxaafadeed maanta oo Arbaco ah ka sheegay duqa degmada Xasan Maxamed Ciise Goodir .
“Cid walba oo Garoowe oo damac kaga jiray in ay kaalin cusub ka furato laga bilaabo maanta waanu joojinay,” Ayuu yiri Xasan Goodir.
Tilaabada ayaa timid hal maalin ka dib markii dab balaaran uu qabsaday kaalimo shidaal oo kuyaala magaalada Garoowe kaasoo ay ku dhinteen ilaa shan qof ayna ku dhaawacmeen sideed kale.
June 2, 2018 Ciidamada PSF oo sheegay in 41 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay Buuraha Caalmadow
Tirada Dhimashada dab ka qarxay Garoowe oo gaartay saddex qof
Qardho-(Puntland Mirror) Siciid Cawil Caare, oo ahaa sargaal hore oo katirsan ciidamada Somaliland, ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq jabhadeed oo ka dhan ah maamulka Somaliland. Isaga oo ka soo muuqday muuqaal lagu daabacay You Tube-ka, wuxuu sheegay [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada maanta oo Axad ah. “Shirkan ayaa ku saabsan sidii wadatashiyo ballaaran looga [...]